केन्द्रीय समितिसँग ओली ड’रले थुरुरु, प्रचण्डलाई कुर्सी भाँ’चिदिने चे’तावनी दिएको खुलासा ! – Sanchar Patrika
केन्द्रीय समितिसँग ओली ड’रले थुरुरु, प्रचण्डलाई कुर्सी भाँ’चिदिने चे’तावनी दिएको खुलासा !
July 18, 2020 223
तीन नेताको ‘जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट’पछि शुक्रबार बेलुकै प्रचण्डनिवास खुमलटार र प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा दुई गुटका बेग्लाबेग्लै बैठकहरु बसे । आफ्नो गुटको भेलामा प्रचण्ड-माधव समूहका नेताहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुने निश्कर्ष निकाले । तर, बालुवाटारमा बसेको ओली गुटको बैठकले भने अहिलेको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाँदा आ’त्मघा’ती हुन सक्ने निश्कर्ष निकाल्यो ।
आखिर भदौमा केन्द्रीय समितिको बैठक राख्ने विहीबारको त्रिपक्षीय सहमतिबाट प्रधानमन्त्री ओली किन ‘ब्याक’ भए ? प्रचण्ड पक्षका नेताहरु भन्छन ओली केन्द्रीय समितिसँग ड’राएर थुरुरु भएका छन् । नेकपाको आन्तरिक कलहमा धा’क ध’म्की र चेतवानीले अहिले निक्कै ठाउँ पाएको छ ।
केहि समय अघि मात्रै प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अर्का पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई कुर्सी भाँ’चिदिने चेतावनी दिएको खुलासा भएको छ । यो प्रसंग नेकपाका सीमित नेताहरुलाई मात्र थाहा छ, जसले असार १० बाट शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक ‘न मरीजाने, न गरीखाने’ अवस्थामा पुर्‍याइदिएको थियो ।
प्रसंग हो, स्थायी कमिटीमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बहुमत पक्षका नेताहरुलाई दिएको क’डा चे’तावनी । आफूलाई प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षबाट ग’लह’त्याएर निकाले कुर्सी भाँ’च्दिन्छु, हात छाडे (कुनै एक्सन लिए) उठ्नै नसक्ने गरी जवाफ फर्काउँछु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड पक्षका नेताहरुलाई केही दिनअघि चेतावनी दिएका थिए ।
ओलीले पछिल्ला भेटमा प्रचण्ड लगायतका नेताहरुलाई भनेका थिए, म यो पदमा टाँसिएर बसिरहन्न । तर, ग’लह’त्याएर निकाल्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई दिन्न, यो कुर्सी भाँचिदिन्छु । म आफू हात छाड्दिनँ, तर तपाईहरुले हात छाड्नुभयो भने उठ्नै नसक्ने गरी जवाफ फर्काउँछु, त्यसको सामना गर्न तयार हुनुस् ।
आफू अल्पमतमा पर्दा पनि सचिवालय र स्थायी कमिटीलाई आफूवि’रुद्ध निर्णय गर्न नदिएका ओलीले अहिलेसम्म प्रचण्ड र माधव नेपाललाई भन्दै आएका थिए, ‘अध्यक्ष हुने भए महाधिवेशन पर्खिनुस, प्रधानमन्त्री हुने भए अर्को चुनावसम्म पर्खिनुस् । प्रचण्ड-माधव समूहको ड’र शुरुमा ओली हटाउने निर्णय गर्दा उनले संसद विघटन गर्ने, सं’कटकाल लगाउने, पार्टी फु’टाउने जस्ता क’दम चाल्छन् कि भन्ने थियो ।
केपी ओलीले भनेका कुर्सी भाँच्ने र हात फर्काउने दुई पदावलिभित्र नेकपाभित्रको सं’कट सुर्केनी लाग्दै आएको छ । बहुमतले निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हट्न भनेमा उनले नमान्ने घोषणा गरेका थिए । कुर्सी भाँ’च्छु भनेर उनले आफूलाई ह’टाए अरु कोही बस्न नसक्ने गरी देशलाई संवैधानिक सं’कटमा धकेल्छु भनेको अर्थमा प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका नेताहरुको बुझाइ थियो ।
यसबीचमा केपी ओलीले बहुमत पक्षभित्रै खेलेर गठबन्धन भ’त्काउन प्रयास पनि गरे । यसबाट उनी आफ्नो पदको सुरक्षाका लागि सबै विकल्पको सामना गर्ने तयारीमा छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर, अन्ततः उनले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको सामना गर्ने आँट गरेनन् र पछि हटे । प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले केपी ओलीलाई दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेका बेला ओली पक्षले भने असार १० यता लगातार अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद नछाड्ने बटमलाइन बनाइरह्यो ।
Prevरणविर कपुरको डुप्लिकेट जुनइदको २८ वर्षको उमेरमा नि’धन
Nextआयो खुसीको खबर। यातायात व्यवसायीको मुख्य माग सम्बोधन गाडी चलाउने
जाने हैन त अन्तरिक्ष घुम्नलाई ? नासाले जारी गयो यस्तो सूचना…
कस्तो रहला त तपाइँको आजको दिन, हेर्नुहोस् आज साउन ८ गते बिहीबारको रा’शिफल !’